२० सेकेण्डको उत्तेजनाले यसरी बर्वाद भयो जीवन::mirmireonline.com
आ. व.: ०७४/०७५ | दर्ता न: १७८/०७३/०७४ | प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिमिल्सिना, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना | सोम, अशोज १०, २०७३
२० सेकेण्डको उत्तेजनाले यसरी बर्वाद भयो जीवन
….माफ गर्नुहोला तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोबाईलको स्वीच अफ् गरिएको छ । ….. पटक पटक यस्तै मोबाईलमा रिएक्सन भए पछि श्रीमति निरमाया घरमा गन्गनाउछिन् । हैन यो मान्छेलाई के भएको छ आजकाल ? बेला बेलामा फोन स्वीच अफ् गर्छन् , राति सम्म घरमा आउदैनन् के भा हो ? श्रीमतीलाई के थाहा कि उनका पति जनक दोस्रो महिलासग‘ रसलिल्लामा छन् भनेर ।
जनक अक्सर हप्तामा चार पाच पटक सम्म दोस्री श्रीमतिको रुपमा नरहे पनि यौनसाथीको रुपमा रहेकी प्रितिसग‘ मोज गर्न पुग्दथे । शुरुमा मोबाईल अफ् हुने यस्तै मात्र कुरा भएकाले घरमा आउदा निरमायाले कराउने , सम्झाउने गरिन् । तपाई यसो नगर्नु मलाई धेरै पिर लाग्छ । अनि जनक बोल्छन् तलाई खान लाउन देकै छ , चुप लागेर बस्न , म बाहिर कहिले काममा हुन्छु कहिले का तलाई के को चासो ?
हैन चासो त हुन्छ नि आफ्नो लोग्नेको ? निरमाया भन्छिन् । है हल्ला नगर जनक कराउछन् ।
समय वित्दै गयो जनक उसै गरी फोन बन्द गर्दै हराउदै गर्न थाल्यो । यसले निरमायाको तनाव कम भएन ।
निरमायाले सोचिन पहिलाको जनक र अहिलेको जनक । उनको मनमा आयो । “आहा प्यारी , निरमाया , म तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु कि कुनै दुखः हुन दिने छैन । अनि हामीले एउटा मात्र बच्चा जन्माउनु पर्छ है भन्ने गर्थे जनक । ” ।
अ‘ह अहिले त जनक राति सुत्ने बेलामा रक्सीको गन्ध आएको हुन्छ । श्रीमतिले यसो हातले मसार्न खोज्दा हात फालिदिन्छ ।
झन सेक्स एक्टीभीटिज त छदै छैन ।
यो क्रम निरन्तर चले पछि निरमायाले जनकको पिछा गर्ने निधो गरिन् । सार्वजनिक विदाको दिन थियो । समय त्यस्तै बिहानको १० बजेको हुदो हो । जनक सधै जसरी घरबाट निस्किए । उनले चलाउने मोटरसाईकल स्टार्ट गरे अनि कानमा फोन राखेर कुरा गर्दै बाईक हुईक्याए ।
त्यस पछि निरमायाले पहिले नै अनुरोध गरेर राखेकी एक ट्याक्सीमा चढेर पछि पछि गईन् । जनकको मोटरसाईकल करीब २ किलो मिटरको यात्रा पछि एउटा गल्ली तिर छिरेर सेतो रङको ३ तले घर अगाडी रोकियो ।
निरमायाले आफू चढेको ट्याक्सी पनि करीब एक सय मिटर वर रोकाईन् र जनकको फोटो आफ्नो मोवाईलमा कैद गरिन् ।
जनक घरको आगनको ढोका खोलेर भित्र पसे । त्यस पछि निरमाया त्यसै घरको ढोका नजिक पुगेर माथि हेरिन् । त्यसबेला एक युवती जनकलाई अंकमाल गरेर हास्दै थिईन् । उनी संवेदनशील अंगको माथिल्लो भाग देखिने गरीको निलो गाउन लगाएकी गहुगोरो वर्णकी थिईन् ।
निरमाया छागाबाट खसिन् ….उनलाई आफु जमिनमा छु या कहा होस हवासै भएन । हातखुट्टा लुला भए बसौ या उभिरहु ,या त चिच्याउ , रौउ के गरौ गरौ ।
उनको मानसपटलमा विगतका कुराहरु चलचित्र झै आउन थाल्यो । परिवारका सदस्यले आफुलाई अस्वीकार गर्दा जनकलाई अब तिम्रो र मेरो जीवनको यात्रा यहिसम्म रहेछ । आफ्नो आफ्नो बाटो लागौ भनेर हिडेकी उनलाई पिछा गरेर हातको नशा काटिको सम्झिईन । उपचारपछि पनि उनले भनेकी थिईन यो पागलपन हो जनक हामि एक हुन सक्दैनौ ।
तर उनले जवाफ फर्काएका थिए तिमि बिना म मर्छु ,बा आमा पछि मानिहाल्छन् नमाने नी मैले हो तिमिसग जीवन बिताउने तिमिबिना मर्छु भनेका थिए । गाउ छोडेर हिड्न लागेकी निरमायालाई रोक्न उनले बिष खाएपछि बाध्य भएर जनकसँग भागेर बिबाह गरेकी थिईन् । यी सब एकाएक सिनेमामा चलिरहेको दृश्य झै एकाएक आउर्दै ओझेल पर्दै गए । उनका अगाडि अर्को सत्य थियो । विगत हैन वर्तमान थियो ।
आफ्ना अघि एउटा मानव रुपमा साक्षस छ । त्यस्तै भान भयो उनलाई । सिधै गएर दुबैको माछु लुछेर खाउ झै पनि नभएको हैन । तर जे भएपनि आफ्नो पति नेपाली समाज ,आफन्त सबै सोचेर उनी गहभरी आशु बनाई पुन घर फर्किईन ।
तर घरमा बुढा आएपछि प्रमाण्सहित ठिक पार्छु भन्ने सुरमा थिईन् उनी । आखामा आशु त थियो नै तर मनमा अब यसलाई म पनि त्यत्तिकै कहा छाड्छु र भन्ने शाहस थियो निरमायामा ।
उता पार्वतीलाई जनकले बिहे गर्ने भनेर फसाएका थिए । म एक्लो छु राम्रो जागिर छ , तिमीलाई म जे सुकै खुसी दिन सक्छु चिन्ता नगर तर तिमी मेरी हुन पर्यो । जनकको यो कथनले पार्वती मख्ख थिईन् ।
करीब एक घण्टा बन्द कोठा भित्र यौनलिला रचेका उनीहरुबीच प्रमका वार्तालाप भए । पार्वतीले तिमी मलाई साच्चीकै माया गर्छौ नि , धोका त दिदैनौ नि भनेर सेक्सुअल एक्टीभिटिजको अन्तिम क्षण अघि जनकलाई सोध्थिन् । अ मेरो कसम म तिमीलाई जसरी पनि भित्र्याउछु मेरो बनाउछु डार्लिङ डन्ट वरी । जनकको भनाई यस्तो थियो ।
यसरी जनकले पार्वतीलाई झण्डै ६ महिना लुटिसकेको थियो ।
त्यसदि उ काममा गएको थिएन , सिधै पार्वतिको गोठामा एको जनक त्यहाबाट मोटरसाईकल लिएर डुल्दै घर पुगे । निरमाया ढोका खोल । ढोका खुल्यो एक छिन्मा तर निरमायाका गला अचानक अबरुद्ध भए जनकलाई कुनै प्रतिकृया नदिई ओछ्यानमा गएर पल्टिईन् ।
अनि जनकले के भो काली तलाई सञ्चो भएन कि क्या हो प्रश्न गरे ? तर निरमाया बोलिनन् ।
तर केही बेरको मौनता पछि निरमायाले तपाई मलाई नढाटी भन्नुस् आज कहा जानु भएको थियो ? जनकलाई सोधिन् ।
अरे साले खाली त मलाई कहॉ गईस् भनेर सोध्छेस , म जहा सुकै जाउ रक्सी खाउ कि बियर खाउ तलाई के चासो परो चुपचाप बसेर खान । धेरै टेन्सन दिने हैन है भन्द्या छु नि ?
तपाईलाई अर्कै केटी मन परेको थियो , अर्के सग लभ थियो भने मलाई किन झुक्याएर फसाउनु भयो , आज जुन आईमाईके अंगालोमा बेरिएर आउनु भयो त्यो को हो ? एकै स्वासमा आएको निरमायाको आक्रोस र प्रमाणित प्रश्नले आत्तिए जनक ।
अरे के भन्छे यो राणी , नचाहिदो कुरा नगरै त्यस्तो मेरो गर्लफ्रेन्स सर्लफ्रेन्ड केही पनि छैन , वाहियात कुरा गर्छ…आखा तर्दै जनक अलि अध्यारो भएर अर्कोतिर फर्किए ।
मनमा निकै कुरा खेले पछि निरमायाले अब कि यसलाई अब त्यो आईमाईसग‘ छुटाउछु कि म आफै छाड्छु भन्ने अठोट गरिन् । अनि मोबाईल खोलेर यो फोटो हेर्नुस् यो के हो ? कसको घर हो यो र यहा किनु जानु भएको थियो ? भने पछि जनकले मुर्मुरिएर निरमायाको गालामा थप्पड हाने । तर उनी झुकिनन् र निरन्तर प्रश्न गरीरहिन् कि त्यो आईमाईलाई छाड्नुस कि म डिभोर्स दिन्छु ।
निरमायाले फेरी प्रतिप्रश्न गरे पछि जनकले हो त्यो मेरो गर्लफ्रेन्ड हो , म त्यसैलाई बिहे गर्छु , घरमा ल्याउछु तैले के गर्छस् भनेर धम्की दिए ।
त्यसो भए मलाई डिभोर्स चाहियो अहिले नै वकिलकोमा हिड्नुस् भने पछि जनक मानेनन् ।
विस्तारै कुल हुदै गए पछि उनले निरमायासग‘ माफी मागे जस्तो गरे , अब देखि त्यो आईमाईसग‘ नभेट्ने नजाने भनेरी प्रतिवद्धता जनाए ।
त्यस पछि केही दिन उनले निरमायासग‘ शारीरीक सम्पर्क पनि राखे । केही दिन त अब यस्तो जमाना छ आखिर कसैलाई थाहा छैन के बिग्रिएको छ र भन्दै बुढालाई माफि दिएर खुसीका साथ बसिन् ।
तर एक दिन निरमाया आफन्तकहा गएकी थिईन् । पार्वति जनकको डेरा सोध्दै ढोकामा आईन् ।
अचानक यसरी ढोकामा पार्वती आएको देखे पछि जनक अत्तालिए र पार्वतीलाई बाहिरै बसेर कुरा गरौ भने । एक छिन् त पार्वतीले सुनिन् ।
तर पार्वतीले आफ्नो पेटमा छाम्दै तिमी घरमा श्रीमति राखेर म सग‘ प्रेमको नाटक गर्ने भन्दै अब यो पेटको बच्चा के गर्छौ भनेर कराउन थाले पछि लौ त्यसो भए अब हामी भागौ र बिहे गरौ भनेर जनकले भने ।
अनि उसलाई डेरामा बस्दै गर म राति आउछु भनी फर्काए ।
जव रात पर्यो निरमाया निदाई राखेको बेला जनक निस्किएर पार्वती भएकोमा गए । काठबाट निश्कने बेला निरमायाका आखा खुलेका थिए ,उनले सोधिन कता बुढा राति । जनकको छोटो जवाफ आयो , उता भतिजाको छोरो बिरामि भो रे म अस्पताल पुगेर आउछु है । उनले विश्वास गरिन् ।
तर जव बिहान बुहारीको फोन आयो आन्टि अंकल खै ।आज दुबै जना खाना खाने गरि आउनु है । उनी झस्कीईन अंकल त बाबु बिरामि भाकोले राति नै हस्पीटल आउनुभाको त अनी के यतै फर्कनु भयो र ।
बुहारीले भनिन् कहा हुन आन्टि बाबु ठिक छ । यता आउनु भा छैन । उनको होस उड्यो ।
उता जनक पार्वतिलाई लिएर अन्तै कोठा लिएर बस्न थालेका थिए । केहि दिन अघि नै कोठा खोजेर निरमायाको आखा छलि घरमै भएका ग्यास , भाडा कुडा लगेका रहेछन् ।
भाडामा बस्ने निरमाया गर्भवती थिईन् । त्यस्ती श्रीमती छोडेर मात्रै हिडेनन् जनक ,घरमा भएका आधा सामान , बैंकमा भएको पैसा , निरमायाका गरगहना , आफन्त साथिभाईसँग उधारो त्यतिमात्र कहा हो र कोठा बहाल पनि तिरे भनेका थिए । पाच महिनादेखि बाकी रहेर ।
निरमायाको बिजोग भयो । नत आत्महत्या गर्नु न त माईत जानु । यही पीर सहदै निरमायाले लोग्ने जनकको खोजीका लागि भन्दै प्रहरीमा निवेदन दिईन् । तर ६ महिना वित्यो प्रहरीले कुनै कार्बाही गर्न सकेन । प्रहरीले त निवेदनै पोको पारेर थन्क्याएको देखे पछि उनी झन निरास बनिन् ।
केही पत्ता लागेन मात्र भने पछि निरमाया घर गईन । तर बिबाहमा त मन्जुरी नदिएका बाबु आमा ,जेठ्ठाजु , नन्द आमाजुले राम्रो गर्ने कुरै भएन । त्यो नावालकगर्भमै रहेको बालकलाई समेत छोराको हैन भनेर सासु र आमाजुले आरोप लगाए । सबै सामान पोको पारेर लुकाईदिए । न खान पाई न त टाउको लुकाउने ओत ।
बाध्य भएर माईतमा गएर बस्न थालिन् । उनी राति , दिन जतिखेरै आफ्ना पतिको नम्बरमा फोन हान्छिन् तर जहिले स्वीच अफ् छ कहिलेकाही खुल्यो भने उठ्दैन । उनी पेटमा ६ महिनाको गर्व बोकेर जनकको खोजीमा निरन्तर बसेकी छन् तर जनकको कुनै पत्तो छैन……।
उनी सराप्दैछिन् कि मर्न पाए नि हुन्थ्यो कि मलाई यत्रो बिजोग बनाउने त्यो कुकुर मरेकै खबर आए पनि बेसै हुन्थ्यो बरु । अब के गर्ने ?
सोम, अशोज १०, २०७३ मा प्रकाशित
पारिजातले आफ्नो पहिलो यौन अनुभव डा मास्केलाई यसरी सुनाएकि थिईन् (दुर्लभ पत्रसहित)
कलानिधि इन्दिरा महाविद्ध्यालय ५५ बार्षिक उत्सव मनाउदै